China Isantya esiphezulu seRoller Crusher abavelisi kunye nabathengisi | Umenzi weBricmaker
I-roller yi-alloy ngobulukhuni obungaphezulu kwe-HRC50 nickel ephezulu, i-molybdenum, izinto zobhedu kunye ne-vanadium, ubunzima obunobunzima obuninzi, kunye ne-angle encinci yokondla. Ingakhama kwaye ixove izinto ezingafunekiyo, icokise izinto ezingavunyelwanga kunye nemveliso ephezulu, iphucule iplastikhi, inciphise inqanaba lenkunkuma, kwaye iqinisekise umgangatho wezitena eziholo.
Kufanelekile ukuba kwenziwe izinto ezingaphantsi kobulukhuni obuphakathi (ubunzima bePlatins 4-5), njengodaka lwentaba kunye nolwakhiwo lomhlaba kunye nokuxolela.
Igama lebrand BricMaker
Umsebenzi Izinto zokwenza imveliso zigqiba ukutyhoboza
Impahla engekasilwa Udongwe, Umhlaba, Udaka, uShale, Amalahle, iAsh, iGangue
Umgaqo wokuSebenza 2-mqengqeleki Ukutyunyuzwa
Isiqinisekiso Iminyaka eli-1
Umsantsa ojikelezayo kabini
Ngama-75 + 95
UkuSebenza kunye nokuGcina
a) Phambi kokumiliselwa kwesixhobo, umqhubi kufuneka aqwalasele izinto zokubopha ezahlukeneyo ngononophelo, ezingenakuba namalungu akhululekileyo okanye alahlekileyo. Iindawo ezijikelezayo ziya kukhangela ngokuqinisekileyo ukuba akukho nto ibhloka.
b) Umatshini unokufaka ekusebenzeni ngaphandle kokulayisha emva kokuhlola apho onke amalungu asebenzayo aqhelekileyo. Kufanele ukuba ibe kwiiyure ezi-2 eziqhelekileyo emva kokusebenza komthwalo. Lonke ixesha lokuqalisa kwakhona akufuneki ukuba umthwalo ulayishe kuqala, emva kokufikelela kwisantya esikalisiweyo kwaye emva koko ubeke ukusebenza komthwalo.
c) Ngenxa yokungafani ngokungafaniyo kwezinto, ukungcangcazela komatshini wonke osebenzayo kunokuzisa i-fasteners into evulekileyo, ke qiniseka ukuba uyijonga rhoqo.
d) Nangona iseti mqengqeleki yobulukhuni iphezulu, nathi kufuneka sithintele ngaphezulu kwamatye alukhuni, umxube womxholo wentsimbi ekuvulekeni kokutya, ngenxa yoko umonakalo kuseto lwe-roller.
e) Xa uxinzelelo lwe-roller ethe tyaba ngaphezulu kwe-132884.8N, izikhonkwane zokhuseleko kumaziko einshurensi kumacala omabini ziyanqunyulwa ukukhusela izixhobo. Logama ibuyisela ibhokisi ekhuselekileyo inokuqhubeka nokusebenza. Ukuba uxinzelelo lwecala elinye lidlula i-66442.4N, i-pin yokhuseleko iya kunqunyulwa.
f) I-grease ye-calcium yokuthambisa (i-ZFG-1) iye yatofwa kwi-rolling bearing ngexesha lokudityaniswa kwezixhobo, kwaye igrisi kufuneka itshintshwe okanye yongezwe emva kweentsuku ezili-10 ukuya kwezi-20.
g) Amacala amabini e-roller ehambelanayo anokugcina acocekile ngalo lonke ixesha, kwaye udibanise i-20 # yeoyile yomatshini rhoqo (ixesha elingu-1 / ishifti), ukuze uluhlu oluhlengahlengisiweyo luhambe ecaleni kwezitshixo zendlela ngamandla otyumkileyo kunye namandla entwasahlobo, kwaye emva koko ukwandisa amandla otyumkileyo.
h) Ukulungisa iringi yokulungisa ukunxiba: qhaqha ukukhusela imaski kumacala omabini omzimba, beka isixhobo sokugaya esifakwe kwisisu semoto ngomkhono weshafti, isikrufu sokuqinisa, ukujikeleza iroller (<10 r / min kufanelekile, kunokusebenzisa isinciphisi sesantya esiphezulu).
i) Ukuhambisa ihewheelwheel, hlengisa indawo ehambelana nayo, ujike ukulungisa iseti ye-roller.
Egqithileyo Hammer Crusher Adjustable
Okulandelayo: Ukonakala Stone Ukususa mqengqeleki
Iphindwe kabini iRotor Hammer Crusher